प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आईतवार १५:५१
काठमाडौ , अर्घाखाँची जिल्ला भुमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्बर ६ खिल्जी निवासी स्व. रुक्मागत गैरेको ४५ दिनको पुण्य तिथिमा श्रद्वाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ । शनिवार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रम बिच श्रद्वाञ्जली सभा सम्पन्न भएको हो ।
श्रद्वाञ्जली सभामा पूर्वउपप्रधान मन्त्री तथा नेकपाका स्थायी समिती सदस्य एवम् यूवा तथा खेलकुद बिभाग प्रमुख टोपबहादुर रायमाझीले स्व. गैरेको परिवारलाई सम्वेदना व्यक्त गदै उनको फोटोमा माल्यापर्ण गरे ।
रायमाझीले स्व रुक्मागत गैरेसंग २०४० साल देखी सामिप्यता रहेको स्मरण गर्दै गैरे राजनीतिसंगै समाज सेवामा समेत कृयाशिल रहदै आएको बताए । स्व. गैरेले आफनो क्षमता अनुसार समाजमा ठुलो योगदान दिएर गएको बताउदै नेता रायमाझीले अर्घाखाँची जिल्लासंगै देशको लागी ठुलो क्षती पुगेको बताए । रायमाझीले भने ‘उहाँ मरेर गए पनि समाजमा ठूलै छाप छोडेर गएको महशुश हुन्छ, हामी बाँचेकाहरुले उहाँको योगदानलाई सम्झीरहे, त्यहि नै उहां प्रति सच्चा श्रद्दाञ्जली गरेको ठहर्छ’ उनले भने । शोकलाई शक्तिमा बदलेर स्व. गैरेको योगदानलाई पछ्याउने काममा लाग्नु पर्ने रायमाझीले बताए ।
सोही कार्यक्रममै नेता रायमाझीले १० बर्षको जनयूद्व र २०६२—०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धी कसैको धम्की र हिंसाले उल्टन नसक्ने बताए । पूर्वउपप्रधान मन्त्री समेत रहेका रायमाझीले बिप्लब समूहलाई लक्षित गर्दै हिंसा, हत्याको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गरे ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता डिलाराम आचार्यले स्वर्गीय रुक्मांगत गैरेको निधनले समाज र देशको लागी नै ठुलो क्षती भएको भन्दै उनले समाजमा देखाएको योगदानको अनुसरण गरेर अगाडी बढन जरुरी रहेको बताए । नेता आचार्यले भुमिगत कालमा स्वर्गीय गैरेले आफूहरुलाई बिभिन्न पटक सल्लाह सुझाब संगै सेल्टर दिएको स्मरण समेत गरे ।
नेकपाका नेता लक्ष्मण रायमाझीले परिवार जनमामा समवेदना व्यक्त गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदल्द ै अघि बढ्नु पर्ने बताउए । नेता रायमाझीले आफुहरुले राजनीति संगठन बिस्तारको क्रममा आईपरेका विभिन्न कठिनाईको हल गर्न गैरेले सहजीकरणको वातावरण निर्माण गरेको स्मरण समेत गरे ।
श्रद्वाञ्जली सभा कार्यक्रमको सभापतित्व गरेकाभएका स्वर्गीय गैरेका कान्छो भाई विनाराम गैरेले दाईको निधनले परिवारमा परेको शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रण गर्दै अगाडी बढने बताएका थिए । उनले दाईको निधनले परिवारको मियो र समाजले असल नागरिक गुमाएको बताएका थिए ।